Maalinta: 20-ka July, 2019
Tareenka Xawaaraha Sare - YHT - Xawaaraha Tareenka Cusub ee Cusub
Tareenka Xawaaraha Sare ee 'YHT' - Khadadka Tareenka Xawaaraha Sare ee Sare: Dhismaha wadooyinka tareenka xawaaraha sare ku socda, isku xirka xudunta u ah Ankara, Ankara, Sivas, Ankara, Afyonkarahisar, İzmir iyo waddooyinka Ankara-Konya. [More ...]
Yaxya Kabtanka Dadku Waxay Bilaabaan Dirir Tareen
Dadka reer Yahya Kaptan waxay sii wadaan iska-caabintooda ku aaddan marinka qadka ee marxaladda labaad ee Tram Line oo ay qorsheeyeen Waaxda Gaadiidka ee Degmada Kocaeli. Khadka tareenka ee degmada Kocaeli [More ...]
Jadwalka baska ee bilaashka ah ee Meejeedpark Aagga Fair
23. Sababo la xiriira howlaha Dhaqanka iyo Farshaxanka Malatya ee caalamiga ah iyo Bandhigga Apricot, adeegyada basaska lacag la'aanta ah ee loo tago Mişmişpark Fair Area waxay bilaabeen inay soo abaabusho Dowladda Hoose ee Magaalaweynta Malatya. Duqa Magaaladda Malatya Selahattin Gürkan, Muwaadinka Mişmişpark Fair [More ...]
Gaadiidka Waqooyiga ee Malatya Gawaarida Raadsami doona
Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha, ayaa booqday goobta loo yaqaan 'Northern ring Road' ee Malatya, dadaalada lagama maarmaanka u ah dhameystirka mashruuca iyaga oo baaritaan ku sameynaya yiri. Gobollo badan iyo siyaasiyiintii Malatya laga soo bilaabo xilliyadii hore ilaa xilligan [More ...]
Wasiirka Turhan, ayaa u yimid inuu booqasho ku yimaado Malatya, dhismaha socda ee Waddada Ringt Road. Kadib, Turhan wuxuu booqday Degmada Malatya ee Magaaladda waxayna wargelisay shaqadii Duqa Magaalada Selahattin Gürkan. [More ...]
Gawaarida Köseköy Raadinta Wadada Gaadiidka
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, xarunta degmada ee Kartepe ee isku xireysa oo bixisa taraafikada wadada Istanbul - Ankara Köseköy Junction ayaa la furay bishii Febraayo ee sanadkan. Biyo-goynta taasoo si dhab ah u dejineysa shabakadda gaadiidka [More ...]
Uludağ Ultra Marathon ayaa bilaabay
Uludağ Ultra Marathon, oo ay soo qabanqaabisay Bursa Metropolitan Municipal oo ay ka soo qeybgaleen ciyaartooydii 1000, waxaa bixiyay Duqa Magaalada Alinur Aktaş. Duqa Magaalada Caasimadda, wuxuu caddeeyay in hay'adda caalamiga ahi ay gacan ka geysan doonto dhiirrigelinta Bursa. [More ...]
Xarunta Logistics Center waa mid muhiim ah
Turkey la furitaanka Xarunta tareenada Baku-Tbilisi-Kars Kars Logistics ee nidaamka gaadiidka ganacsiga gobolka Project in ay nolosha ku bixiso. Serhat Kars bartamaha magaalada dhisay logistics la Turkey ay gobolka halkaas oo [More ...]
Sarp Intermodal Deeqda ku jirta Gaziantep
Sarp Intermodal, oo ah mid ka mid ah shirkadaha hormuudka ka ah safarka ku meel gaarka ah, ayaa sii wata maalgashiyadiisa gudaha. Shirkaddu waxay xafiis ka furtay Gaziantep waxayna u dhoofin doontaa dhoofinta dadka ku nool gobolkan Port Mersin Port ilaa Yurub iyo Waqooyiga Afrika iyada oo loo marayo isku-dhafka. Talyaaniga, Bulgaria [More ...]
Maanta taariikhda: 20 July 2017 Baku-Tbilisi-Kars Railway
Taariikhda Maanta 20 Luulyo 1940 Tareenka ugu horreeyay ee ka yimid Baqdaad wuxuu soo gaadhay Haydarpasa. 20 Luulyo 1994 Türk-İş, Disk, Hak-İş iyo shaqaalaha dadweynaha iyo ururada dimoqraadiga ah waxay ka mudaaharaadayaan kordhinta mushaharka iyagoo hogaaminaya madal. [More ...]